रा’ति सुत्नुअघि गर्नुहोस् यो काम चम्किनेछ अनुहार देखिनुहुनेछ जवान ! - समृद्ध नेपाल
आ’जको वर्तमान समयमा प्रत्येक व्यक्ति सबैभन्दा सु’न्दर देख्न चाहन्छन् तर बढ्दो वायु प्रदूषण र व्यक्तिको तनावको कारण छालाको प्राकृतिक चमक हराउँदै जान्छ जसको कारण अनुहारको चाउरीपन दिनदिनै बढ्दै जान्छ । कारण यो छ कि अनुहारमा कुनै पनि चमक देखा पर्दैन त्यसैले मानिसहरूले बजारमा फेला परेको रासायनिक उत्पादनहरू बढी मात्रामा प्रयोग गर्छन् ।
जसले गोरोपन बढाउँछ तर क्रीम प्रयोग गर्न रोक्ने बित्तिकै त्यसको साइड इफेक्ट देखा परिहाल्छ त्यसैले रासायनिक बढी मुल्य पर्ने उत्पादनहरूको सट्टा तपाईले घरेलु उपचारहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ । यदि तपाईं आफ्नो कालो छा’ला हटाउन चाहानुहुन्छ भने यसका लागि हामी तपाईंलाई एउटा यस्तो उपाय बताउने छौं जुन तपाईंको छालालाई नोक्सान नगरी सुधार गर्दछ
आउनुहोस् जानौँ त्यो के हो त ? आजको पोस्टमा हामी तपाईलाई जुन चिजको बारेमा बताउने कुरा गर्दै थियौँ त्यो हो आलु । आलु एक यस्तो चिज हो । जसलाई हामी सब्जी बनाएर उपयोगमा लिने पनि गर्दछौँ। तर यसले खानबाहेक अन्य कुराहरु जस्तै त्वचालाई सुन्दर बनाउनमा पनि यसले काम गर्दछ ।आउनुहोस् जानौँ काँचो आलुलाई त्वचाको लागी कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त ?
यदि तपाई रातको सुत्ने स’मयमा आलुको टुक्रालाई काटेर आफ्नो अनुहारमा लगाउनुहोस् । यसरी लगाउनाले तपाईको अनुहारमा भएको कालो धाग धब्बा र पिम्पल्स हटेर जानेछ र अनुहारको रगं पनि बदलिनेछ। यदि तपाईको अनुहार कालो कालो छ भने पनि यो ढिलो ढिलो गरेर भएपनि हटेर जानेछ । यदि तपाई आफ्नो अनुहारको कालोपन हटाउन चाहानुहुन्छ भने पनि तपाई आलुको
उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागी तपाईले रातमा काँचो आलुलाई मिक्सरमा पिस्नुहोस् र यसमा १ चम्चा काँचो दुध मिसाएर पेस्ट बनाउनुहोस् । र यस पेस्टलाई रातको समयमा अनुहारमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् र बिहान उठेर पानीले मुख धुनुहोस् । यस्तो गर्नाले तपाईको अनुहार चम्किनेछ । यदि तपाई
आलुको पेस्टमा बेसन मिलाउनुभयो भने पनि यसले तपाईको त्वचालाई लाभ पुर्याउँदछ । यसले हाम्रो त्वचा अधिक मुलायम र सुन्दर बनाउँछ । यो एक प्राकृतिक घरेलु उपचार हो यसले कुनै पनि साइड इफेक्ट गर्दैन । यस्तै थप जानकारी दिइएका छाै पढ्नुहाेला !
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो !
यसपालीको तिहार यस्तो रह्यो प्रचण्ड परिवारको !
विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल र शिक्षिकाको स्कुटर दुर्घटनामा परी मृत्यु !
मेरी आमाको ज्यान बचाए…भन्दै बीच सडकमा घुँडा टेकेर रोइन् राखी !
श्रीमती भन्छिन् अब पुग्यो, श्रीमान भन्छन् छोरा नै चाहिन्छ ! छोरा पाउने आसमा एक दम्पति
भर्खरै बिबाहित बन्धन मा बाधिएका जोडि श्रीमान को निधन खबर सुनेर श्रीमतीको पनि निधन। !
नेपालमा यिनै हुन् कोरोना कारण ज्यान गुमाउने पहिलो नेपाली महिला !
दाइको अनुरोध ठुलो भएर ऋण तिर्छौ भाइलाई बचाइदिनुहोस् !
अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन नसकिने भयो : सरकार
चालकको हातमा स्टेयरिङ, कारबाहीबाट बच्न मिलापत्र !